Digniin: Taliyaha Guud ee ciidanka Booliska ayaa jeediyay Dhalinyarada Xaafadaha Hargeysa | Salaan Media
Home Wararka Digniin: Taliyaha Guud ee ciidanka Booliska ayaa jeediyay Dhalinyarada Xaafadaha Hargeysa
Digniin: Taliyaha Guud ee ciidanka Booliska ayaa jeediyay Dhalinyarada Xaafadaha Hargeysa
Hargeysa (SM)-Taliyaha guud ee ciidamadda Booliska Somaliland Sareeyo guuto C/laahi Fadal Iimaan ayaa digniin u diray dhalinyaro uu sheegay in koox -koox isku laayaan xilliyada habeenkii xaafadaha Magaaladda Hargeysa, isla markaana ay boolisku raacdo ugu jiraan soo qabashadooda.
C/laahi Fadal Iimaan oo caawa u waramayay idaacada Radio Hargeysa ayaa ka dalbaday waalidiinta dhalay dhallinyaradaasi in ay ka war hayaan carruurtooda, waxaanu sheegay in ciidamda boolisku ay amar u haystaan qabqabashada dhallinyaradaasi si aanay u horseedin xaalad ammaan darro.
“Waxaan idin la socodsiinayaa in ayaamahan danbe magaalada Hargeysa ay ka bilaabmeen kooxo dhallinyaro oo kooxo isku dilaaya kuwaas oo ciidanka boolisku aad uga hawl-galay isla markaana uu gacan bir ah ku qaban doono dhallinyaradaasi oo beryahan danbe xaafada qaarkood wareeriyay waxana qaarkood wareeriyay,”ayuu yidhi Taliyaha Ciidanka Boolisku.
Taliyaha Boolisku waxa uu intaasi ku daray “Ciidanka boolisku wuu ku hawl jiraa qaar badana hore ayaanu u qabanay sharcigaa la horgeeyay oo maxkamada kala duwani ganaax lacageed ka qaadeen iyo xadhigba. Waxaan halkan uga soo jeedinayaa in ciidanka boolisku gacanta ugu adag ku qaban doonaan oo sharciga la horgayn doono.”
C/laahi Fadal Iimaan isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi “Waxaan waalidinta u soo jeedinayaa ama bulshada Somaliland gaar ahaan caasimada in cid kasta oo waalid ah ubadkooda gacan bira ku qabtaan. Ciidanka booliskana gacan ku siiyaan kana warqabaan ubadkooda halka uu jiro taas oo dhallinyaradaasi dadkaa qaar u gaysteen dil nafeed iy mid hantiyeedba ciidanka boolisku wuu ku hawlan yahay hawlgal kaasina waxa uu socon doonaa si joogta.”
“Waxaanan horgayn doonaa sharciga, waxaana lagu qaban doonaa gacan adag si ay uga waantoobaan, waalidiintana waxaan u soo jeedinayaa inay u badkooda ka war hayaan haddii iskuul jiro iyo haddii uu meel kale jiro. Cidii falkaas lagu qabtana aanay ha dhawto ka daba iman. Sharciga la horgayn doonaa,”ayuu yidhi C/laahi Fadal Iimaan.